Apple neGoogle zvinopa rumwe ruzivo nezve yavo yekutevera system vachipesana neCOVID-19 | IPhone nhau
Chiziviso che Apple neGoogle vanobatana nemauto munzira dzisina kumboitika yekurwisa coronavirus yanga isina gakava, izvo zvakamanikidza makambani maviri kujekesa uye kuita shanduko.
Kune avo vanga vasingazive nezvenhau idzi, Apple neGoogle vakazivisa mazuva mashoma apfuura chibvumirano chekuti makambani ese pamwe nenharembozha dzawo, dzinoverengera 99% yemusika wepasi rose, dzaigadzira hurongwa hwaizobvumidza kuteedzera nako vanhu vatinosangana navo muswere wese kuitira kuti kana paine wavo kana isu pachedu takatapukirwa neCOVID-19, chiziviso chaizotumirwa kune vese vaaibata navo mumazuva ekupedzisira. Makambani ese ari maviri akasimbirira kuti kuvanzika kunovimbiswa nguva dzese, asi vakatadza kunzvenga kusahadzika kwevakuru veEuropean neAmerica, mukuwedzera pakuburitsa dzimwe nguva nhau dzenhema idzo kunyange dzimwe nhepfenyuro huru dzinotepfenyura.
Sisitimu iyi inoshandisa kubatana kweBluetooth yezvigadzirwa zvedu, zvisinei nekuti ndeveApple kana maApple madivaysi, ndosaka kuri kudikanwa kuti makambani ese abvumirane. Iyo nhambwe iri pakati pezvigadzirwa ichashandiswa kuziva daro pakati pevanhu vanovatakura, uye izvi zvinogona kuzivikanwa nesimba reBluetooth kubatana kwakamisikidzwa pakati pavo. Uye zvakare, iyo nguva yatinopedza nemumwe munhu ichatarisirwawo. Zvimwe zvinhu zvakaita sekunge iPhone yedu yakabatana nemotokari inogona kushandiswa kudzivirira maaramu enhema, sezvo tichigona kusangana nemunhu ane hutachiona mumwe nemumwe mumotokari yedu akamira parobhoti, pasina njodzi yekutapukirwa.
Makambani ese ari maviri akachinja mamwe maitiro ekuti mashandiro aya anoshanda, senge encryption iyo inoshandiswa. Iyo data yakavharidzirwa kuti pasave neanogona kuiwana kunyangwe dai zvaiitwa neyedu kifaa, uye pachinzvimbo cheHMAC encryption iyo yavakaratidza pakutanga, inozopedzisira yoshandisa kunyorera kweAES, izvo zvinonzi zvinoita zvirinani pamidziyo yese. Makiyi eiyo encryption ichagadzirwa zvisina kurongeka uye zvechinguva, saka kunetsekana kwekuwana makiyi aya kuchave kwakanyanya kunyangwe uchishandisa reverse engineering.
Iyo system ichachengetedza rese data revatinoshamwaridzana navo kwemazuva gumi nemana, uye panguva iyo munhu anonyoreswa seakanaka muCOVID-19, vanozomira kutora data ravo, nekuti munhu iyeye anofanira kugara ari ega. Vashandisi vanogona kudzima ruzivo rwakachengetwa pamidziyo yavo chero nguva, rangarira kuti ichave iri sisitimu iyo kutora chikamu kuri kwekuzvidira uye mushandisi anogona kumira kutora chikamu chero nguva.
Sisitimu iyi ichatora pasi COVID-19 positives kamwe pazuva, ruzivo ruchazotungamirwa nemasangano akakodzera, uye rwunozovaenzanisa neavo vakanyorerwa pafoni yedu. Iyi cheki ichaitwa pane yedu kifaa, kwete mune chero "gore". Kana runyorwa rwekuburitswa rwasimbiswa, kana paine vatinoshamwaridzana navo akaverengerwa mune irwo runyorwa, isu tichaudzwa nekukasira, uye tichazopihwa mirairo yekuita.
Muchikamu chekutanga, Apple neGoogle zvinopa maAPIs kune vanogadzira, uye isu tichafanirwa kumisikidza mafomu eiyo system kuti ishande. Izvi zvichaitika mukati memwedzi waMay. Chikamu chechipiri chakarongwa umo iyo sisitimu yese yakaiswa pamidziyo pachayo, pasina chikonzero chekuti chero chishandiso chiiswe, asi mushandisi anofanira kunge ari iye anoita basa racho, hachizove chinhu chinoshanda nekutadza. Apple neGoogle vanga vachida simbisa mamwe akakosha mapoinzi kuti zvive pachena kuti kuvanzika kunovimbiswa uye kuti chichava chinhu chokuzvidira chose chose.
Vashandisi vanofanirwa kumisikidza mashandiro pane avo mafaera
Vanogona kuimisa chero nguva vasina kupa chikonzero
Dhata renzvimbo haina kuunganidzwa
Kuzivikanwa kwemushandisi hakuna kugoverwa
Kuzivikanwa kweBluetooth yedu kunoshandurwa yega yega 10-20 maminetsi kuitira kuti tirege kuteverwa
Zviratidzo zvekuratidzira zvinoitwa pane edu zvishandiso, hazvina kuiswa kune chero gore kana kugoverwa
Apple neGoogle vanozogona kudzima iyo system mudunhu kana pasisina basa
Masangano ehutano Hwevanhu chete ndiwo anokwanisa kuwana chirongwa ichi
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Apple neGoogle zvinopa rumwe ruzivo nezve yavo yekutevera system vachipesana neCOVID-19